HBO MAX သည်ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့တွင်ရုပ်ရှင်နှင့်ပြပွဲအသစ် ၁၂၀ ကျော်ထပ်တိုးသည် - Netflix အသစ်ထုတ်လုပ်မှုများ
HBO MAX သည်ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့တွင်ရုပ်ရှင်နှင့်ပြပွဲအသစ် ၁၂၀ ကျော်ထပ်တိုးသည်
Hbo Max Adds More Than 120 New Movies
Gooni - - (သတိပေး BROS ။ )
ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့တွင် Hulu ရုပ်ရှင်နှင့်ပြပွဲအသစ် ၆၀ ကျော်ပြသခဲ့သည် Space Force ရာသီ (၂) ရက်၊
HBO MAX ရုပ်ရှင်ကားအသစ် ၁၂၃ ခုနှင့်ဇွန် ၁ ရက်တွင်ထုတ်လွှင့်နိုင်သည်
HBO MAX သည်မေလ ၂၇ ရက်တွင် HBO ၏ထင်ရှားသောပြပွဲများနှင့်ရုပ်ရှင်များနှင့်အတူပြသခြင်းနှင့်ရုပ်ရှင်အသစ်များဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ ကောင်းပြီ၊ ဇွန် ၁ ရက်မှာအဲဒီရုပ်ရှင်တွေနဲ့ပြပွဲတွေကပိုကြီးလာတယ်။
ဟောလိဝုဒ်သတင်းထောက် အပေါ်အသစ်ရဲ့အရာများ၏စာရင်း shared HBO ကျွန်တော့်ရေတွက်ပြီးတဲ့ဇွန်လမှာ MAX၊ HBO MAX ကဒီနေ့အသစ်ရုပ်ရှင်များနဲ့ပြပွဲ ၁၂၃ ခုကိုထပ်မံထည့်သွင်းထားပါတယ်။ လူတိုင်းအတွက် streaming ၀ န်ဆောင်မှုကိုဒီကနေ့ကြည့်ရှုရန်တစ်စုံတစ်ရာရှိလိမ့်မည်။
HBO Max ခေါင်းစဉ်အသစ်များသည်ရုပ်ရှင်များဖြစ်ပြီးအများစုသည်ရုပ်ရှင်အသစ်များဖြစ်သည်။ သူတို့ကပဲသူတို့ရဲ့ပြဇာတ်ပြေးသို့မဟုတ်တူသောဘာမှမပြီးအောင်ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီအစား၊ ဒါတွေက streaming service အတွက်အသစ်အဆန်းရုပ်ရှင်တွေပါ။
သော်လည်း, စိတ်ပျက်စရာဖြစ်မနေပါနဲ့။ ယနေ့ HBO Max တွင်ထည့်သွင်းထားသောဖြန့်ချိမှုအသစ်များသည်အထူးကောင်းမွန်စွာရှိနေသည် အဆိုပါ Goonies, Elf, အရာအားလုံး ဆယ်ကျော်သက် Mutant Ninja လိပ် ရုပ်ရှင်များ, Hobbit ရုပ်ရှင်များ, သူဟာ The NeverEnding Story၊ Veronica Mars၊ X-Men၊ ပထမတန်းစား။ ဒါအများကြီးအများကြီး!
အဖြစ်ဝေးငါပြောနိုင်အဖြစ်အများကြီးဇွန်လ 1 ရက်နေ့တွင်စီးဆင်းရန်မရရှိနိုင်ပါပြပွဲအသစ်များမရှိကြပေမယ့် HBO မက်စ်အပေါ်သူအပေါငျးတို့ခေါင်းစဉ်အသစ်ထွက်မိတ်ဆက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖွယ်ရှိပါတယ် စတင်ရက် ။
မသိသောသူတို့အဘို့, HBO မက်စ်အဘို့အသီးသန့် streamer ဖြစ်လာခဲ့သည် သူငယ်ချင်းများ၊ Big Bang သီအိုရီ၊ ဗေလလေ၏လတ်ဆတ်သောမင်းသား၊ နှင့်အခြားလူကြိုက်များစီးရီး၏နံပါတ်။ Rick နှင့် Morty နှင့်အခြားလူကြိုက်များသောအစီအစဉ်များကိုလည်း streaming service တွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
pll ရာသီ 7b လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ netflix
HBO Max ရုပ်ရှင်အသစ်များ၏စာရင်းအပြည့်အစုံနှင့်ယနေ့ရရှိနိုင်သောပြပွဲများကိုကြည့်ရှုပါ။
HBO Max ရုပ်ရှင်အသစ်များနှင့်ပြပွဲများ - ဇွန် ၁ ရက်
ကလေးထိန်း၌ Adventures ကို
တစ် ဦး ကစင်ဒရဲလားပုံပြင်: တစ်ချိန်ကအပေါ်သို့သီချင်း
ပုခက်2သင်္ချိုင်း
ယောသပ်သည် Lees ၏အိပ်မက်
4 & Forever: Muck City၊ ရာသီတစ်ခု
မိုD်းမလင်းမှီ Til Dawn မှ
Gente de Zona: နောက်ထပ်စာတစ်စောင်တွင်
ဟော့ဘစ် - မမျှော်လင့်သောခရီးတစ်ခု
ဟော့ဘစ် - စမဂ်ကိုနှိမ်နှင်းခြင်း
Like Flint ၌တည်၏
အဆိုပါ Iron Giant
ဒါဟာနှစ် ဦး ကြာ
Looney Tunes: ပြန်သွားပါ
McCabe နှင့်မစ္စစ် Miller က
Miss Pettigrew သည်တစ်နေ့တာအတွက်ဘဝ
တစ် ဦး က Monster ခေါ်ဆိုသည်
အဆိုပါ Neverending ပုံပြင်
The Neverending ပုံပြင် II: နောက်အခန်း
အဆိုပါ Parallax ကြည့်ရန်
Pedro Capo: နောက်ထပ်စာတစ်စောင်မှာ
Rugrats Go ကိုတောရိုင်း
သူမသည်အဆိုပါက Man ပါပဲ
ရှားလော့ဟုမ်းစ်: Shadows ၏ဂိမ်း
ဆယ်ကျော်သက် Mutant Ninja လိပ်
ဆယ်ကျော်သက် Mutant Ninja လိပ် 2
ဆယ်ကျော်သက် Mutant Ninja လိပ် 3
Turbo: Power Rangers ရုပ်ရှင်
Tweety ရဲ့ High- ပျံ Adventures ကို
၂၀၂၀ ဇွန်လတွင် streaming ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန် HBO MAX ရုပ်ရှင်များနှင့်ပြပွဲများပိုများသည်။ Ferrari vs. Ad Astra, Ford vs. ရာသီအလိုက် တောင်ပန်းခြံ၊ နှင့် ငါအမှောင်ထဲမှာသွားလိမ့်မယ် ထို့အပြင် streaming ဝန်ဆောင်မှုကိုဒီလနှောင်းပိုင်းတွင်ထည့်သွင်းလိမ့်မည်။
၂၀၂၀၊ ဇွန်လတွင် HBO MAX တွင်သင်ဘာတွေကြည့်ရှုမည်နည်း။ ကျွန်တော်တို့ကိုအောက်ပါမှတ်ချက်များအပိုင်းအတွက်သိပါစေ!
နောက်တစ်ခု:35 အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်အသစ်များနှင့်ပြပွဲများ: ဇွန်လ 2020
အသစ်သောမိန်းကလေးတစ်ဦးရာသီ6Netflix လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ
Rick နှင့် morty ရာသီ4ဇာတ်လမ်းတွဲ3putlocker
ရာသီ3အပျိုစင်စတင်качанအခါ